I-FDA iyayamkela iBiktarvy ye-HIV | Uvavanyo - Iindaba | Eyenkanga 2021
Cinezela Imfundo Yezempilo, Iindaba Imidlalo Enzima Izilwanyana Zasekhaya Imidlalo Inkampani, Ukuphuma Ulwazi Lweziyobisi, Iindaba Ulwazi Lweziyobisi, Imfundo Yezempilo Inkampani, Iindaba Uluntu, Inkampani Ekuhlaleni Iindaba, Impilo Inkampani Impilo-Ntle Impilo
Eyona >> Iindaba >> I-FDA ivuma iBiktarvy ukuba isetyenziswe kwiirejimeni ze-HIV
I-FDA ivuma iBiktarvy ukuba isetyenziswe kwiirejimeni ze-HIV
Ngelixa lingelonyango lwe-HIV, ukuvunywa kwe-FDA kutshanje kuya kunceda abantu abane-HIV baphile ixesha elide. NgoFebruwari 2018, uLawulo lwezoKutya kunye noLawulo ikuvumile ukusetyenziswa kweBiktarvy kunyango losulelo lwe-HIV-1 kubantu abadala. Ngelixa iBiktarvy (okanye naliphi na iyeza elikhoyo le-HIV) lingenakho ukunyanga i-HIV okanye i-AIDS, ngokudibeneyo namanye amayeza e-HIV, inokunceda abantu abosuleleke yi-HIV ukuba baphile ixesha elide kunye nokunciphisa ukubasulela abanye abantu.
I-biktarvy inokumiselwa kwizigulana ezingazange zithathe amayeza e-HIV ngaphambili. Inokutshintsha amayeza e-HIV ezigulana ezikwirejimeni ye-HIV okwangoku. I-Biktarvy akufuneki ithathwe kunye namanye amayeza e-HIV-1.
I-Biktarvy yipilisi equlethe izinto ezintathu ezisebenzayo. Enye ibizwa ngokuba yi-bictegravir-sisiyobisi esitsha. Isebenza ngokuthintela i-enzyme ye-HIV ebizwa ngokuba yi-integrase. I-Integrase yi-enzyme i-HIV exhomekeke kuyo ukuziphindaphinda nokusasazeka emzimbeni wonke, ke ngokuvimba i-enzyme, i-bictegravir ithintela i-HIV ukuba ingaziphindisi kwaye yehlise inani le-HIV emzimbeni. Ezinye izinto ezimbini ezisebenzayo yiemtricitabine (ekwabizwa ngokuba yi Emtriva kunye ne-tenofovir alafenamide (ekwabizwa ngokuba yiVemlidy). La machiza mabini, awayevunyiwe ngaphambili kunyango lwe-HIV-1, ai-nucleoside reverse transcriptase inhibitors.Bavimba i-enzyme ebizwa ngokuba yi-reverse transcriptase, ethintela intsholongwane kagawulayo ekubeni ingazenzeli ikopi.
Isebenziselwa ntoni iBiktarvy?
I-Biktarvy, njengepilisi enye enamachiza amathathu, iyayinqanda i-HIV ekuphindaphindeni. Ngokumisa ukuphindaphindeka kwe-HIV, iBiktarvy inganciphisa umthamo wentsholongwane emzimbeni (umlinganiso wokuba zingaphi iisuntswana zentsholongwane ngemililitha esegazini) ukuya kumanqanaba angabonakaliyo. Iyakwandisa inani lamajoni omzimba egazini.
Yamkelwa njani iBiktarvy?
Isigqibo sokwamkelwa kweBiktarvy siza emva kokuba iSayensi yaseGiliyadi, inkampani exhasa ichiza, ibhengeze iziphumo ezivela kwizilingo ezine zeeveki ezingama-48 zabantu abadala abangama-2,414 abane-HIV-1. Ezi zifundo zifumanise ukuba iBiktarvy iyasebenza kunye nezinye iirejimeni eziqhelekileyo ze-HIV, ukwehlisa umthamo wentsholongwane kunye nokwandisa iiseli zomzimba zokuzikhusela kwi-CD4 +.
I-Biktarvy vs. ezinye iirejimeni ze-HIV
Ingxaki rhoqo kwiirejimeni ze-HIV ukunyanga okuvela kunyango. Ngeli xesha ke i-HIV iba nokumelana namachiza asetyenziswayo ukunqanda intsholongwane ukuba ingaphindeki. Izigulana ezikwisifundo ezanyangwa nge-Biktarvy zaboniswa ukuba zingaphuhlisi ukumelana nokunyanga kwesiyobisi.
IGiliyadi ixhasa ngemali iimvavanyo zonyango ezongezelelekileyo zeBiktarvy zokufunda ngechiza labasetyhini, abakwishumi elivisayo, kunye nabantwana abaphila ne-HIV.
Ikhawuleza kangakanani iBiktarvy?
I-biktarvy ingathoba amanqanaba e-HIV egazini lakho ukuba lingafumaneki ngokukhawuleza kwiiveki eziyi-8 ukuya kwezi-24.
Iziphumo ebecaleni zeBiktarvy
Njengoninzi lweziyobisi, imiphumela zirekhodwe ngokusetyenziswa kweBiktarvy. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukukhula ngokuqatha kwe-Hepatitis B, kunye ne-acid yelicic egazini ekwabizwa ngokuba yi-lactic acidosis. Iziphumo zeBiktarvy zinokubandakanya iingxaki zezintso, urhudo, intloko ebuhlungu, isiyezi, isicaphucaphu, kunye notshintsho kumajoni omzimba. Olunye unyango oludala lwe-HIV lunokubangela ukulahleka kweenwele, kodwa oku akusiyo impembelelo yecala le-Biktarvy.
I-Biktarvy inokusebenzisana namanye amachiza. I-Biktarvy akufuneki ithathwe kunye namanye amayeza e-HIV. Buza ugqirha wakho ukuba zikhona ezinye iziyobisi ozithathayo ezinokusebenzisana neBiktarvy. Akufanele kuthathwe ukuba ngoku uthatha i-dofetilide okanye i-rifampin. Kuya kufuneka ukwazise umboneleli wakho wokhathalelo lwempilo ukuba ukhulelwe okanye ucwangcisa ukukhulelwa, okanye ukuba usebenzisa ulawulo lokuzalwa kwehomoni (ezinje ngeepilisi, iringi yelungu lobufazi, okanye izinto zofakelo).
Ixabisa malini iBiktarvy?
Ngaphandle kweinshurensi, iBiktarvy inokubiza. Iintsuku ezingama-30 Iindleko zeBiktarvy yi- $ 3,811.99. Nge-SingleCare, iindleko zincitshisiwe zaya kwi-3,191.11 yeedola. Umenzi, uGiliyadi, unikezela Inkxaso yepopay , njengekhadi le-Biktarvy copay, elinokunciphisa ixabiso xa uhlangabezana neziqinisekiso ezithile.
Ngaba ungathatha iibhloko ze-beta kunye nokuzilolonga?
Ngaba kukhuselekile ukuthatha iCymbalta ngelixa ukhulelwe?
ndingathatha i-xanax ukuba im kwi-zoloft
Ungayithenga i-hydrocortisone ekhawuntareni
Ungathatha isicwangciso ixesha elingakanani b
ukutya okumnandi ekutyeni xa unengqele
Ungathatha ibuprofen ixesha elingakanani emva kokusela?
ungaphakama uphume kwiprozac